Sida loo tirtiro tijaabada bilaashka ah ee Apple TV ka hor inta aadan bixin | BehMaster
Sida loo joojiyo tijaabada bilaashka ah ee Apple TV ka hor inta aanad bixin" />
Bogga ugu weyn/iPhone/
Sida loo tirtiro tijaabada bilaashka ah ee Apple TV ka hor inta aanad lacag bixin
Tijaabada bilaashka ah ee halka sano ah ee Apple TV+ waxa ay dhamaanaysaa dabayaaqada bishan, taas oo la macno ah in dhawaan lagaa dalaci doono si aad u sii wadato rukunka. Haddii aadan rabin inaad isticmaasho Apple TV+ horay u soco, waxaad u baahan tahay inaad joojiso.
Waan ku tusi doonaa sida.
Sida loo tirtiro Apple TV+
Markii Apple TV + uu sameeyay kulankiisii ​​​​ugu horreeyay ee 2019, Apple waxay soo bandhigtay tijaabo hal sano ah kuwa iibsaday iPhone, iPad ama Mac cusub. Kadib waxay kordhisay tijaabada bilaashka ah laba jeer, marka hore ilaa Janaayo 2021 ka dibna ilaa dhamaadka Juun.
Waxa si toos ah laguugu dalaci doonaa $4.99 khidmad bille ah Apple TV Haddii aadan sameynin, waxaad u baahan tahay inaad laftaadu tirtirto. Waa kan sida.
Ka tirtir Apple TV+ ee iPhone ama iPad
Waa kuwan tillaabooyinka lagu raaco iPhone iyo iPad:
Fur fur app Store.
Taabo avatar ka dhanka midig ee sare, ka dibna taabo Macmiil.
Raadi oo xulo Apple TV +.
tubada Cancel Trial Free.
Ka hel Apple TV+ ka-qaybgalkaaga, dabadeed taabo Jooji.
Ama ka jooji Mac kaaga
Waa kuwan tillaabooyinka lagu raaco Mac:
Guji magacaaga geeska bidix ee hoose ee abka.
Riix Daawo Macluumaadka ka dibna gal akoonkaaga Apple.
Hoos u rog si aad u hesho Macmiil, kadibna guji Maamul.
Raadi Apple TV+ ka dibna dhagsii Edit.
Click ah Jooji Isdiiwaangalinta Badhanka.
Nidaamku wax yar ayuu ka duwan yahay Mac.
Ama jooji Apple TV+ onlayn
Haddii sabab qaar ka mid ah aadan heli karin aaladda Apple, waxaad burin kartaa Apple TV+ aad online.
Tag tv.apple.com shabakad kasta oo browser ah
Xulo astaanta akoonka xagga sare ee bogga. (Haddii aadan arkin astaanta, ku dhufo Gal ka dibna ku soo gal Apple ID.)
Hoos u dhig Macmiil, kadibna dooro Maamul.
Dooro Jooji Isdiiwaangalinta.
Sida dib loogu qori karo Apple TV+
Haddii aad dhamaystirtay mid ka mid ah hababka kor ku xusan, Apple TV+ ka qaybqaadashadaada hadda waa la joojiyay. Waad sii wadan kartaa isticmaalka adeega ilaa tijaabadaadu dhacayso Juun 30.
Taas ka dib, haddii aad isku aragto inaad dareentid in laga tagay - sida marka xilliyada cusub ee Eeg iyo Bandhigga Subaxa timaad dabayaaqada sanadkan - mar walba waad iska qori kartaa Apple TV+. Si taas loo sameeyo, si fudud isku day inaad daawato bandhigga Apple TV+, ka dib raac tilmaamaha shaashadda.
Haddii aad isticmaasho adeegyada kale ee Apple, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad tixgeliso Apple One, kaas oo ku xidha Apple TV+, Apple Arcade, Apple Music iyo iCloud (oo leh 50GB oo kayd ah ama ka badan) hal xidhmo oo ka bilaabmaya kaliya $14.95 bishii. Xirmada Premier sidoo kale waxaa ku jira Apple Fitness+ iyo Apple News+ oo ah $29.95 bishii.
Inta jeer ee lagu dhejiyo Baraha Bulshada 2021
25 ugu Fiican Elementor Addons ee WordPress 2021